Mashruuc lagu taakuleynayo dadka naafada ah oo Garoowe looga dhawaaqay‏(SAWIRO) – SBC
Mashruuc lagu taakuleynayo dadka naafada ah oo Garoowe looga dhawaaqay‏(SAWIRO)
Munaasabad ballaaran oo ay ka soo qeybgaleen mas’uuliyiinta maamulka Puntland iyo madaxda qaar ka mid ah hay’adaha ka howlgalo Garoowe , ayaa waxaa magaaladaasi markii ugu horeysay looga dhawaaqay mashruuc lagu taakuleynayo dadka naafada ah iyo dhowridda xuquuqda insaanka.
Hay adaha UNDP iyo Hand Cape International oo ka mid ah
maalgaliyeyaasha mashruuca ayaa ka soo qeybgalay munaasabaddii loogu dhawaaqayay, iyadoo qaar ka mid ah dadka naafada ah ee gobolkana ay munaasabadda joogeen.
Cabdiraxmaan Maxamed Guure, oo ah sarkaalka ka tirsan hay’adda UNDP, oo ka hadlay sababaha mashruucan loo hirgalinayo, ayaa sheegay in la doonayo raadinta xuquuqda naafada, isagoo tilmaamay in tirada dadkaasi ee adunida ku nool ay yihiin boqolkiba toban, ayna mudan yihiin in wax loo qabto.
Wasiirka Cadaaladda maamulka Puntland, oo isna munaasabadda ka hadlay, ayaa sheegay in dadka naafada ah loo baahan yahay in xuquudooda la ilaaliyo, isla markaana fursado loo siiyo in ay bulshada wax la qeybsadaan.
Mid ka mid ah dadkii naafada ahaa ee munaasabadda ka soo qeybgalay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in mar walba la dhowro xuquuqda qof walba uu leeyahay iyo sidii naafada ay u heli lahaayeen xuquuqda ay leeyihiin, isagoo codsaday in aan magacyo gaar ah oo lagu sifeynayo loogu yeerin dadka naafada ah.
Mashruucan oo socon doono muddo labo sano ah ayaa waxaa ka qeybqaadan doono dadka naafada ah eek u dhaqan gobollada Nugaal, Bari iyo Mudug, iyadoo loo sameyn doono dallad ay ku mideysan yihin.